Ibhokisi yoMculo waMandla 9 uphononongo | Isithethi seBluetooth esinamandla angama-40 W | Iindaba zeGajethi
Ngeli xesha sikuzisa uhlalutyo lwe Isithethi seBhokisi yoMculo 9, Isixhobo esizisa kwintengiso isindululo esinomdla kwisithethi esisemgangathweni esinoyilo oluncinci, kakhulu ngokuhambelana noyilo lwamva nje oluvela kumvelisi weSpanish Energy Sistem. Imodeli ene Ixabiso elingaphantsi kwe- € 90 uyasinika 40 W amandla kunye nonxibelelwano olunomdla kuba ivumela ukudlala umculo ngeBluetooth, i-USB, i-microSD, iRadiyo ye-FM okanye iAudio-in. Ubunzima bayo bungaphezulu nje kweekhilogremu ezi-2, eyamkelekileyo ukukwazi ukuhambisa isithethi ngexesha elifanelekileyo kodwa yenza into egqithileyo ukuyithatha njengesithethi esiphathwayo ukuba sisisebenzise.
1 Iimpawu zeBhokisi yoMculo wamandla 9
2 Uyilo lwesithethi
3 I-Energy Music Box 9 ibhetri
4 Uyithenga phi iBhokisi yoMculo waMandla 9?
7 Iimpawu zobugcisa ezipheleleyo
Iimpawu zeBhokisi yoMculo wamandla 9
IBhokisi yoMculo waMandla 9 isinika amandla okugqibela ee-watts ezingama-40, ngaphezulu kokwaneleyo kwiimfuno zabathengi abaninzi. Bala kunye Inkqubo yesithethi eyi-2.0, enezithethi ezibini ezigcweleyo ezinamandla kunye nezibini ezona ziphakamileyo. Kunye nezandisi-lizwi sinesiphatho sesikhuseli esinganyangekiyo esikwaziyo ukomeleza amaza asezantsi kwaye abonakala ngasemva kwesixhobo.
Ukunxibelelana yenye yamandla alo mzekelo kuba isivumela ukuba sidlale umculo ngeBluetooth 4.2, imemori ye-USB kunye namakhadi e-MicroSD, ukongeza kwigalelo le-3.5 mm jack kunye nerediyo ye-FM. Ikwabandakanya Itekhnoloji eyiyo ye-Wireless Stereo evula ukhetho lokudibanisa iiyunithi ezimbini zeMusic Box ukonyusa amandla kunye nokufezekisa umphumo.
Imveliso yamandla ilahliwe Isidima, uyilo oluncinci kunye nokudityaniswa. Ubunzima bayo be-2,085 Kg, imilo yayo engunxande kunye nobukhulu bayo be-310mm x 120mm x 106mm bayenza ibe yimveliso ezinzileyo, eyamkelekileyo xa sithetha ngesithethi esiya kuthi sihambe sihamba rhoqo. Umgangatho wezinto ezilungileyo ulungile, ukuqaqambisa ukuziva ngathi kumnandi kwaye kulula ukukubamba. Imiphetho ejikeleziweyo inceda ukwenza umxholo wemveliso womelele ngelixa ubonakala ubonakala.
Amaqhosha esithethi abekwe ngaphezulu kwesithethi kwaye zikulungele kakhulu ukuzisebenzisa. Ubungakanani bazo bukhulu kakhulu, kodwa ekubeni iyimveliso enoyilo oluncinci, azibonisi ngokugqithileyo nokuba. Amanye amaqhosha kunye nezihlanganisi (i-jack, i-USB, njl. Njl.) Zibekwe kumacala esixhobo ukuze zifihlwe kakuhle kwaye kulula ukufikelela kuzo. Wonke umntu amaqhosha asemzimbeni, ngokuchaseneyo nemeko yangoku yokusebenzisa amaqhosha edijithali; nanku umcimbi wokungcamla kuba amaqhosha omzimba anokubonakala engathandeki kodwa ngaphandle kwamathandabuzo asebenza ngakumbi kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Isithethi siyafumaneka ngemibala emibini, emnyama nomhlophe, eyimodeli esiyihlalutyeyo kwiActualidad Gadget.
I-Energy Music Box 9 ibhetri
Ibhetri yesithethi yi-4.000 mAh enika Ukuzimela okupheleleyo malunga neeyure ezili-12-13 ezisebenza nesithethi kwi-75% yevolumu; ngaphezulu kokuchanekileyo kolu hlobo lwesixhobo kunye nokusetyenziswa kwalo okuqhelekileyo. Ewe kunjalo, ineshaja yamandla ukuze ikwazi ukuyifaka kwaye isebenze ngaphandle kokusebenzisa iibhetri.
Uyithenga phi iBhokisi yoMculo waMandla 9?
Ungathenga isithethi se-Energy Music Box 9 kwiwebhusayithi esemthethweni ye-Energy Sistem Ngexabiso le- € 89 ngokunqakraza apha.
Ibhokisi yoMculo wamandla 9
Ukudibanisa izithethi ezibini
Uyilo oluncinci, izinto ezilungileyo
Umgangatho webhasi unokuphuculwa
Iimpawu zobugcisa ezipheleleyo
Umqondiso kwiNgxolo yeNqanaba > 90 dB
Unxibelelwano lweBluetooth 4.2 Si
«Igalelo elincedisayo le3 5 mm » Si
Imakrofoni edityanisiweyo enobuntununtunu -42 dB
Ibhetri Umthamo we-4000 mAh
Ixesha lokutshaja ibhetri "Shumi Iiyure ezi-5
Ubukhulu X x 310 120 106 mm
U bunzima "Shumi Iikhilogram ezingama-085 »
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Uvavanyo lwebhokisi yomculo yamandla 9
UThixo wemfazwe wePS4 yayingumxholo wengxoxo kuphuhliso lwayo ngenxa yokuma kwekhamera